July 2015 - Page 42 of 42 - iftineducation.com
MUUQAAL CUSUB: Sida uu u howlgalo Garoonka Aadan Cadde
aadan21 / July 1, 2015
iftineducation.com – Garoonka diyaaraddaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa mudooyinkaan howlaha ka socda ay sii kordhayeen, iyadoo dhismaha cusub ee lagu soo kordhiyay ay horseeday in duulimaadyada yimaada ay noqdeen kuwo si joogto ah maalin walba u yimaada, garoonkana ka dhigay mashquul. Muuqaal cusub ayaa kasoo duubnay qaabka uu u howlgalo garoonka iyo adeegyada casriga ah ee lagu soo kordhiyay.…
DAAWO: Nolosha Dadka AFrikaanka ah ee Yurub ku Nool (VIDEO)
iftineducation.com – Barnaamijkan ayaa ah mid laga soo duubay Umadda Afrikaanka ah ee ku nool wadamada Yurub, iyo sida ay dhaliyaradaas ula macaamilaa dhaqamada aysan horay u aqoon ee ka yaabiya. Hadaba Wariyaha ayaa waxa uu booqanayaa qaar ka mid ah dhalinyaradaas, waxana uu ka waraysanayaa nolosha ay ku noolyihiin iyo Caqabadaha ay kala kulmaan umadaha ay la nool yihiin. Riix…
NAXDIN : Gabdho Muslim ah Oo Iskuul lagu gaaleysiinayo Video
iftineducation.com – NAXDIN : Gabdho Muslim ah Oo Iskuul lagu gaaleysiinayo Video Muuqaalka school lasheegay in gabdhaha muslimiinta ah lagu gaalaysiiyo dalka kenya hoos kadaawo muuqaalka. DAAWO MUUQAALKA NAXDINTAN:
Maryan iyo Caisha Oo Video laga soo duubey Gudaha Siiriya -Muuqaal
iftineducation.com – Gabdho soomaali ah oo muddo dheer laga raadinayay dalka Siiriya ayaa waxa ay soo qireen nolosha dhabta ah ay ku jiraan waxaana ay ku qanacsanaayen qaabka ay nool yihiin iyo dagaalada ay kaga jiraan dalka Siiriya oo ay safar dheer usoo aadeen. Labadan Gabar waa mataano waxaana Maryama qaba Nin u dhashay Sweden oo dagaal usoo doontay dalka Siiriya…
Daawo Sawirada: Shabaab oo soo bandhigay Khasaaraha Amisom kasoo gaaray dagaalkii cuslaa ee Leego
iftineducation.com – Sawiro ay baraha Internetka ku baahiyeen Ururka Al Shabaab ayaa lagu soo bandhigay khasaaraha ciidamada Amisom kasoo gaaray dagalkii cuslaa ee Jimcihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka Leego oo Shabeellaha hoose ka tirsan. Sawirada ayaa laga dhex arkayaa ciidamo badan oo Amisom ka tirsan oo la dilay, kuwaasi oo meydkooda dhex-daadsan xerada Leego dhexdeeda. Sidoo kale waxaa sawirada laga…